प्राज्ञ शशी लुमुम्बू बेलायत आउँदै | We Nepali
प्राज्ञ शशी लुमुम्बू बेलायत आउँदै
वीनेपाली | २०७४ साउन ३१ गते २१:४०
बेलायत । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञासभा सदस्य कवि शशी लुमुम्बू बेलायत भ्रमणमा आउने भएका छन् । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतको निमन्त्रणामा सो संस्था स्थापनाको दशौं वार्षिकोत्सवमा हुने विशेष समारोहका लागि लुमुम्बू यूके आउन लागेका हुन् ।
२६ अगष्टमा प्रतिष्ठानले दशौँ वार्षिकोत्सव विशेष समारोहका साथ गर्दैछ । सो समारोहमा संस्थाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आइरहेको अभिव्यक्ति सृंखला भाग १० का लागि कवि डा. रूपक श्रेष्ठको प्रस्तुति रहनेछ । त्यसैगरी संस्थाद्वारा प्रकाशित ‘एक दशक’ स्मारिका विमोचन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
प्रतिष्ठानले स्थापना कालदेखि गरेका गतिविधि स्मारिकामा समेटिएका छन् । साथै, नेपाली साहित्यमा लाहुरेको तस्वीर, युद्व साहित्य सिद्वान्त, पल्टनघरका नारी स्रष्टाहरू र बेलायतमा नेपाली संगीतको विकासको बारेमा विशेष लेखहरु समेटिएका छन् । प्रतिष्ठानका संरक्षक रक्ष राई र महासचिव मिजास तेम्बेद्धारा प्रतिपादित नवचेतनाग्रह र नेपाली डायस्पोरा सिद्धान्तको मूलभुत विशेषताहरू स्मारिकामा रहने छन् । यसबाहेक संस्थाका पदाधिकारी र सम्बन्धित स्रष्टाहरूको लेख रचना पनि स्मारिकामा रहेको सम्पादक गणेश राईले बताए ।
प्रतिष्ठानलाई स्थापना कालदेखि आजसम्म पुरयाएको योगदानको कदर गर्दै गत साल प्राज्ञ शशी लुमुम्बूलाई मानार्थ सदस्यद्वारा सम्मानित गरिएको थियो । यसअघि सन् २०१५ सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकूलपति बैरागी काईंलालाई प्रतिष्ठानले बेलायत निमन्त्रणा गरेर विशेष सम्मान गरेको थियो ।
भोजपुर जिल्लाको याकु स्थायी घर भएका कवि लुमुम्बू लामो समयदेखि काठमाडौँमा रहेर साहित्यिक क्षेत्रमा सकृय रहँदै आएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञासभा सदस्य लुमुम्बू आफूमात्र लेख्ने नभई अन्य स्रष्टाहरूको सृजना सम्पादन र प्रकाशनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । २०६१ सालमा ‘पहाड बूढो’ कविता कृति प्रकाशित गरेका लुमुम्बूको दोश्रो कृति चाँडै आउँदैछ ।
कवि डा रूपक श्रेष्ठ बेलायतका सकृय स्रष्टा हुन् । कविता बाहेक मुक्तक, गीत, गजल, हाइकु र कथा विद्यामा उत्तिकै कलम चलाउने श्रेष्ठको कविता संग्रह ‘बिगबेन र समय’ (सन् २०१०) र ‘पोख्तक’ (सन् २०१४) मुक्तक संग्रह प्रकाशित छन् । यसैगरी कविता, गीत, गजल, मुक्तक, हाइकु र कथा संग्रह प्रकाशोन्मुख रहेको उनले जनाएका छन् । बाल्यकालदेखि साहित्यमा रुची राख्ने डा. श्रेष्ठका फुटकर रचनाहरू गरिमा, शारदा र युवामञ्चजस्ता पत्रिकामा पहिलेदेखि छापिँदै आएका छन् ।